yazvino apple report inoti airpods 3 & airpods pro 2 iri kuuya muna 2021, airpods x inogona kurova
Kuru Nhau & Ongororo Yekupedzisira Apple mushumo inoti AirPods 3 & AirPods Pro 2 iri kuuya muna 2021, AirPods X inogona kunge iri Beats
Yekupedzisira Apple mushumo inoti AirPods 3 & AirPods Pro 2 iri kuuya muna 2021, AirPods X inogona kunge iri Beats
Apple iri kugadzirira kumutsiridza uye kuwedzera ayo akakurumbira marongero easina waya maearphones mumakore anotevera. Runyerekupe nemishumo zvave kubhururuka kutenderera nguva pfupi yadarika uye nhasi Ming-Chi Kuo akajekesa zvinhu zvishoma.
Apple StudioPods pamusoro-nzeve mahedhifoni
Muongorori akakurumbira haana kutaura nezvake chirevo yeaya anonzi AirPods Lite ayo akataurwa nerunyerekupe mumazuva apfuura kuti atange mwedzi unouya, asi akadzokorora hurongwa hwekufumura mahedhifoni anowedzera munzeve munguva pfupi inotevera.
Kuo anotarisira kuti chigadzirwa chitsva, icho chinogona kutumidzwa seApple StudioPods, kuti chipinde mukugadzirwa kwemazhinji imwe nguva mwaka uno wezhizha. Izvo zvinoita chiziviso kuWWDC kutanga kwaJune, sezvakafanotaurwa naJon Prosser, uye kuburitswa mwedzi yakati wandei gare gare pamwe.
Sezvakataurwa naBloombergsvondo rapfuura, Ming-Chi Kuo anoti anouya pamusoro-nzeve mahedhifoni ari kuuya anokwanisa kuchinjika magineti zvikamu. Apple inonzwisiswa kuve iri kuvandudza maviri akasiyana e StudioPods - premium uye kugwinya - iyo inotsigira iyo Apple Watch-senge maitiro ekugadzirisa maitiro.
Kiredhiti - Audiophile On Hapana ruzivo rwemutengo rwapihwa nhasi, asi mashumo ekutanga akanongedzera ku $ 350 mutengo weti. Izvo zvaizoisa StudioPods sevakwikwidzi vakananga kune mamwe maBose uye Sony mafoni asina waya.
Anorova X Tipster Jon Prosser akati mukutanga kwemwedzi uno kuti Apple iri kuvandudza maParPods akasimba-akasimba anonzi AirPods X. Izvi zvinotarisirwa kupa AirPods Pro-kunge ruzha kukanzura mukugadzirwa kweBeats X, zvichireva kuti pachave netambo yekubatanidza. pakati peearbuds.
Mutengo wemadhora mazana maviri uye munaGunyana / Gumiguru nguva yekumisikidza yakadomwa, asi Ming-Chi Kuo akataura kusahadzika nezve chokwadi chemishumo iyi. Anoti chigadzirwa, icho chinonzi 'AirPods Pro Lite' mumushumo wake, 'chinonyanya kuve' Beats-branded.
Kana chiri chokwadi, izvo zvaizoreva kuti Apple iri kuronga imwe nzira yepamberi kune yazvino-gen Beats X iyo inotengesa pamadhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe muUnited States.
Kuenderera mberi kuenda ku2021, Ming-Chi Kuo anotenda kuti Apple ichatanga gore nekuunza vaviri vechitatu-chizvarwa AirPods. Iwo aripo AirPod akaunzwa munaKurume 2019 uye anofanirwa kunge akagadzirira kukwidziridzwa panguva iyoyo.
Muongorori anoona kugadzirwa kwemazhinji kuchitanga mukati mehafu yekutanga ya2021 asi haatende kuti chero shanduko huru yekugadzira ichaunzwa. AirPods 3 sezviri pachena ichabatanidza iyo iripo AirPods dhizaini neyakagadziridzwa yekugadzira maitiro ayo akafanana neayo eAirPods Pro.
Kunyangwe zvisina kutaurwa, Apple inofungidzira ichaunza huwandu hweshanduro kuchengetedza vatengi vachifarira. Iyo ingangodaro ndeye chipu che odhiyo chakagadzirwa kutsiva Apple H1 iyo yakaunzwa neAirPods 2.
Pakutanga mishumo yakaratidza kuti Apple iri zvakare kuyedza hwakawanda hwehutano maficha eAirPods mukati. Kunyangwe izvi zvichiita kuti zvive AirPods 3 zvinoramba zvichionekwa.
AirPods Pro yakasvika munaGumiguru wapfuura iine nyowani-inzeve dhizaini uye kudzima ruzha; maviri maficha asina kuoneka pane AirPods lineup pamberi. Kunyangwe achingova nemwedzi mitanhatu chete, zvakadaro, Apple iri kutoronga yechipiri-chizvarwa.
Ming-Chi Kuo anoti mune yake investor noti nhasi kuti kugadzirwa kwemazhinji kuchatanga kana kunonoka 2021 kana kutanga kwa2022. Izvi zvinoreva kuti chiziviso chinogona kuitika mukupera kwaGumiguru 2021, makore maviri mushure mekutanga kwekutanga, kana pamwe pagore regore raKurume chiitiko muna 2022.
Iko hakuna izwi pane izvo shanduko dzakarongwa, asi chero chip inogadziridza zvingangotariswa pane yechitatu-gen AirPods yataurwa pamusoro.
oneplus 8 pro t-nhare
T-Mobile inoenderera ichishandisa Sprint & apos; s 2.5GHz spectrum yayo katatu-rukoko 5G network
PUBG Mobile izere nemabhoti here?
iOS 9.3 & apos; s Night Shift, yakaongororwa: chii icho, maitiro ekuigonesa uye kuitisa
Apple & apos; s masterplan kutsiva chikwama chako, zvinyorwa, uye makiyi neApple Watch
Apple iPad 8 vs iPad Air 4: Ndeupi waunofanira kutenga?
Fitbit Blaze smartwatch ine zvinoenderana nenyaya neWindows Runhare zvishandiso
Huawei Tarisa 3 Pro ongororo: Yakashata kutenderera mativi